Iyo mitambo yakanakisa yekutamba muZoom nemhuri uye shamwari 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Munguva ino yekupararira munharaunda nekuda kwe Covid-19 Isu tese tinoshandisa tekinoroji yakawanikwa kuti tiite videoconferences nemisangano yepamhepo, senge TarisaNekudaro, vhidhiyo yekufona inogona zvakare kuve mukana wekunakidzwa, kuronga online online zvikamu zveshamwari nemhuri.
Saka pano tinokupa iwe sarudzo yemitambo yakapusa kutamba. Tarisa (kana paMusangano kana chero imwe vhidhiyo yekufona app), pasina kurodha pasi software kana maapp, asi nekungobatana neshamwari uye mhuri, uchishandisa zvimwe zvinobatsira zvemahara izvo chikuva chinoita kuti zviwanikwe uye kusiira nzvimbo yeunyanzvi hwako uye fungidziro, kukupa iwe maawa e kutandara nekuseka. Kuti upindure usingapindirane uye kuti zvinhu zvese zvinyanye kunakidza, rairo ndeyekusarudza mashoma zviratidzo zvemazwi kuita senge botones.
VERENGA ZVIMWE: Los mejores juegos multjugador
Iyo nguva iwe yaunogona kugovana mharidzo kubva pakombuta yako, unogona zvakare kuitisa a kuongorora zviri nyore kwazvo, nemukana wekugona kusvika kuvanhu vazhinji panguva imwe chete. Izvo zvinoita kuti ufuridzirwe nemitambo yeterevhizheni yakadai se "Ndiani anoda kuva mamioneya" O "Nhaka" uye inosanganisira vanhu vazhinji muzvikwata zvakasiyana kuti vafare pamwe chete. Nekudaro, usatya kutya kufunga zvakakura uye kugadzira zvigadzirwa!
Izvo zvinokwanisika kuenderera nekugadzira iyo mibvunzo nepepa uye zvinyoreso, asi kana iwe uchida chimwe chinhu chedigital, Kahoot unogona kukubatsira. Kahoot Iyo inobvumidza, kutaura zvazviri, kuumba mharidzo yemibvunzo yakawanda yesarudzo, iyo munhu wese anogovera kuburikidza newebhusaiti yavo uye anotarisira vese maneja kana zvasvika pakuvhota uye kuverenga zvibodzwa. Iyo yemahara chirongwa inokutendera iwe kuti ugovane bvunzo Kahoot ine vanhu vanosvika gumi panguva imwe chete, ine sarudzo dzemunhu dzakatarwa dzenguva nemapoinzi.
VERENGA ZVIMWE: Yakanakisa trivia mitambo ine mibvunzo (Android ne iPhone)
Uyu mutambo unoona zvikwata zviviri zvichikwikwidza pane yakagovaniswa online grid yakazadzwa nemazwi uye chinangwa chako ndechekujekesa mazwi echikwata chako nekukurumidza sezvazvinogona. Boka rega rega rinogadza "foromani" uyo ane basa rekupa chiratidzo kune vamwe vake kuti vafembere mazwi mazhinji sezvinobvira: semuenzaniso izwi "zuva" chingave chiratidzo kune ese izwi "nguva" kuti neshoko "mwenje". Zviripachena, kuwanda mazwi iwe aunonyora uine mashoma masystem, iyo inokurumidza iyo bhodhi kujekesa uye nekukwira iyo mikana yekukunda.
Uyu mutambo mukuru unobvumidzawo vanhu kusimuka uye kufamba-famba pamwe nekushanda mune timu mune vanhu vazhinji vakatenderedza yega yega laptop kana webcam. Izvo zvinokwanisika kuita kuti hupfumi huwedzere kwenguva yakareba uye hwakaoma kana hupfupi uye hureruke nechinangwa chekutora zvinhu zvakatarwa, kana zvinhu zvinosangana nezvimwe zvinodiwa, mumba mese. Kuchengeta kukwikwidza pakati pevatambi vakasiyana kukwirira, zvinokwanisika kuwedzera kana kubvisa mapoinzi zvinoenderana nekumhanya uye nehunyanzvi hwevatori vechikamu mukusarudzwa kwezvinhu. Kuchengeta Imba Kwakanaka ine rakasimba runyorwa rweakakosha mazano ekuti utange iwe.
Kuburikidza nebhodhi re Tarisa, inowanikwa muchikamu mugove, unogona kutamba iyo chaiyo vhezheni ye Pagine: zvakare, mumwe nemumwe anenge atora chikamu mumutambo anozogovera yavo bhodhi nevamwe uye otanga kudhirowa pairi. Iwe unogona kusarudza nekugadzirisa mavara akasiyana-siyana, mashizha emakwenzi, nezvimwe zvakawanda kuti mufananidzo wako uve wakasiyana uye wechokwadi.
Wokutanga kutora chikamu kufungidzira zvavari kutora achagamuchira iyo poindi!
Anenge munhu wese ane Monopoly: sezvataona kare kune iyo chessMune ino kesi zvakare, zvese zvaunofanirwa kuita kuimisa, kugadzira nzvimbo kuti komputa ive yakagovaniswa ruzivo uye mutambo. Iwe unozoda maviri kana anopfuura emabhengi, rimwe reboka rega rega. Tarisa, ndiani zvakare achafanira kuve nechokwadi chekuti hapana vanhu vari kuyedza kubiridzira uye kuti izvi zvekudyidzana zviri kure pakati pevatambi zvinoshanda.
Mutambo, zviripachena, uchafanirwa kuitika pamabhodhi echikwata chimwe nechimwe mukufamba kwepawns uye mukuvakwa kwedzimba nemahotera. Ichokwadi kuti mamwe mavara, akadai zviitiko zvisingatarisirwi mi Mukana Ivo vanozoitwa zvakapetwa uye kuti zvimwe zvikamu zvemutambo hazvishande zvachose, asi chakakosha ndechekufara mukambani nekupedza zororo nevadiwa kunyange kubva "kure".
VERENGA ZVIMWE: Bhodhi uye yemitambo mitambo online: njodzi, kuzvitonga uye nevamwe
Uyu mutambo unoda kuti vatambi vese vave nawo Wikipedia kuvhura pane chero chishandiso, ingave iri laptop, piritsi kana foni. Vatambi vese vanofanirwa kuve neiyo yekutanga uye yekupedzisira peji - munhu anoenda kubva kune mumwe achienda kune mumwe munguva ipfupi nguva ndiye anokunda. Mutemo wakakosha ndewekuti iwe unogona kungo pfuura neayo enisaikoropidhi nekudzvanya kana kubata zvinongedzo kubva Wikipedia, saka vatambi vanofanirwa kufunga zvine hungwaru kuti ndezvipi zvinongedzo zvavanofunga kutevera.
Mumutambo uyu, fungidziro ndizvo zvese ... izvo zvinotora kuti ufare! Mumwe nemumwe anotora chikamu, zvekare, anofanira kuedza kuti vamwe vafungidzire chinhu, hunhu, mhuka zviri nyore mimandoli. Iyo chete muganho ipfungwa dzako! Iwe unogona zvakare kufunga nezve kushandura uyu mutambo kuita vhezheni. firimu, nekudaro kutevedzera mazita emamuvhi mafirimu, kunyangwe akaumbwa nemazwi akati wandei. Mune ino kesi, usati watanga kutevedzera iyo firimu, zvakafanira kuratidza huwandu hwemazwi anoumba musoro wobva… uvhure dambudziko!
Mumwe mutambo unonakidza kutaura Tarisa es Fembera rwiyo, yerudzi rwe Sarabanda Pamhepo izvo zvinokonzeresa kunakidzwa uye kukwikwidza Zvakanakisa apa kutora mukana wekugovana mumhanzi basa iro rinogona kumisikidzwa nekudzvanya pane icon mugove wobva waenda kuchikamu Akafambiswa uye kusarudza chinyorwa Goverana chete odhiyo yekombuta. Panguva iyoyo, odhiyo kubva kumakomputa yemunhu wese anopiwa basa rekusarudza rwiyo rwekufungidzira richagovanwa nevamwe vese. Zvichave zvakakwana, saka, kutanga rwiyo uye ... mirira wekutanga kuti agone kupa mhinduro chaiyo mune mega kupokana kweruzivo uye mimhanzi reactivity.
Kana iwe uchida chimwe chinhu chinyararire zvishoma, iyo chess iwo mutambo uri nyore kukanda Tarisa. Chokwadi, unogona kutamba chess pamhepo kana kuburikidza chero mhando meseji, asi kushandisa nguva uchitaura kune mudiwa wekure pamusoro chessboard kuchaita kuti unzwe padhuze. Iwe unongofanirwa kurangarira kufambisa zvidimbu pamabhodhi ese ari maviri kuti ugare uine shanduko yemutambo uri pasi pekutonga. Uye kune vanonyanya kufarira, zvinokwanisika kutamba kwemazuva akati wandei: ingosiya gadziriso yebhodhi nezvidimbu zvese munzvimbo. Izvi zvakare zvinokupa iwe nguva yekuronga zano rekukunda!
VERENGA ZVIMWE: Chess uye vakadzi mahara paApple, iPhone uye online
Kukwira - Kukwira
Akazvarwa sekurovedza muviri mukati kushanda pamwe chete kune vashandi vanoshanda vari kure, Kufamba yave kuwanikwa kune chero munhu anoda kuyedza mahara.
Munyori anotungamira vakasara veboka, akapatsanurwa kuita zvikwata zvinokwikwidza, achigovana masiraidhi anopa mukana ku sarudza chako chinonakidza- Iwe unozofanirwa kuita sarudzo dzeboka kuburikidza nepuratifomu yekutumira mameseji esarudzo yako kuona kuti timu yako inopona husiku uye kunze kwenzira inokuvadza.
Tamba Makosi Mumusangano wevhidhiyo, iwe unoda imwe yemusoro yekuita uye yakawanda mwenje kuti vhidhiyo haina kunyanyisa kukura. Chinhu chemutambo ndechekukumbira muimbi kuti auye nezano uye arimise kuitira kuti vamwe vese veboka rake vafungidzire. Ivo vanotora chikamu muvhidhiyo kufona vanogona kutarisa, kuteedzera nguva, uye kuve nechokwadi chekuti hapana kubiridzira kunoitika. Kana vese vatori vechikamu vaine seti yemakadhi Makosi kumba kuri nani.
VERENGA ZVIMWE: Tamba Bhingo, mamaki uye nhamba yekubvisa
Mune zvimwe zvinyorwa zvatakaona zvakare:
10 mitambo yevaviri yekutamba pane imwechete PC kana pamusoro peInternet (HTML5)
20 mitambo yemahara yekutamba mitambo yepamhepo uye kutamba uchipesana neshamwari